सालोको श्रीमतीको बेडमा राती भिनाजु भेटिएपछि…… !! ससुरा रुदैं मिडियामा (भिडियो) « Np Online TV
सालोको श्रीमतीको बेडमा राती भिनाजु भेटिएपछि…… !! ससुरा रुदैं मिडियामा (भिडियो)
ओखलढुंगा निवासी युवराज बुढाथोकी रोजगारीको क्रममा विदेश थिए । उनकी श्रीमती पार्वती लामिछाने घरमै छोराछोरीको हेरविचार गर्दै एउटा सनो पसल सम्हालदै आएकी थिइन् ।
तर आहिले युवाराजका आफ्नै भिनाजुले उनकी श्रीमती पार्वतीलाई लिएर हिडेका छन् ।
भिनाजुले अहिले युवराजको सम्पूर्ण घर नै बिगारेर हिडेका छन् । दिदी र भाइ युवराज अहिले निकै पिडामा गुज्रिएका छन् । युवराजकि दिदिले आफ्नो श्रीमानलाई पार्वतीसंग सु ती रहेको भेटेकी हुन् ।
उनले आफ्ना श्रीमान यसरी बुहारीसंग लठारिएको देख्दा उनलाई कस्तो भयो होला त्यो हामी कल्पनापनि गर्न सक्दैनौं । युवराजका बुबा अहिले हामीसंग रुदै आएका छन् । छोराले कमाएको पैस बुहारी पार्वतीले सबै भिनाजुलाई खुवाएको र अहिले घरमा एक पैसापनि नभएको हुँदा आफुले रिन काडेर घर चलाउनु परेको उनी बताउँछन् ।
पार्वती र उनका नाठो भिनाजु अहिले फरार छन् । बुबाका अनुसार आफुले कमाएको र छोराले कमाएको सबै पैसाले पसल खोलेको र अहिले पसल नै बेहाल बनाएर बुहारी भिनाजुसंग भागेको हुँदा उनी आफ्ना छोरा र छोरीकोलागि न्याय खोज्दै भौतारी रहेका छन् । हेर्नुहोस भिडियो: